पल शाह प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईले दिए यस्तो प्रतिक्रिया — Imandarmedia.com
पल शाह प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पल शाह प्रकरणबारे टिप्पणी गर्दै न्यायिक फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्। उनले ‘मर्दकी दशवटी’ भन्ने मानसिकता बोकेर पीडकको पक्ष लिनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्।
ट्वीटरमार्फत टिप्पणी गर्दै उनले न्यायिक फैसलाको सम्मान गर्न आग्रह गरेका हुन्। अदालती प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा पल शाह पक्षधरको दिनहुँ भइरहेका प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहँदा भट्टराईको यस्तो भनाइ आएको हो।
यस प्रकरणमा मानवअधिकारवादी, सेलिब्रेटी र सार्वजनिक वृत्तबाट समेत भनाइहरु बाहिर आएका छन्। एक नाबालिकामाथि जबरजस्ती क’र’णी’को अभियोगमा पल शाह जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा छन्। उनलाई अदालतले अभियोगबारे बयान लिइरहेको छ।
समिक्षाको पक्षमा बोल्न थाले अभिनेत्रीहरू: पल शाह प्रकरणमा मौन रहँदै आएका अभिनेत्रीहरु बिस्तारै खुल्न थालेका छन्। यस्तैमा अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले पल बिरुद्ध उजुरी दिने नाबालिग गायिकाको समाजले चरित्र हत्या गर्नु गलत भएको बताएकी छन्।
उनले पीडितको चरित्रमा प्रश्न उठाउनु समेत गलत भएको धारणा राखेकी छन्। प्रियंकाले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस पोस्ट गर्दै पीडितको विपक्षमा आवाज उठाउने दिदी बहिनीको समेत आफुले सम्मान गर्ने बताइन्।
दुखको कुरा, हामी यस्तो समाजमा बाँचेका छौँ, जहाँ पीडितले म पीडित हुँ’ भन्न मात्र पनि ठूलै हिम्मत बोकेर आउनुपर्छ’ कार्कीले भनिन् ‘यस्तोमा, अगाडि बढेर आवाज उठाउने हरेक पीडित महिला दिदी–बहिनीहरुको म भित्री आत्मादेखि नै कदर गर्दछु।
नेपालमा रहेको नाबालिगको हकको कानुन उमेरको हदबन्दी १८ वर्ष नेपालमा मात्र नभएर विश्वका धेरै देशमा भएको जानकारी दिँदै उनले विश्वका सबै देशमा, आफ्नो परिवेश अनुसार,उमेर नपुगेकाहरुले ‘निर्णय लिन सक्ने क्षमता’लाई ध्यानमा राखेर यस्तो कानुन बनाएको बताएकी छन्।
नाबालिगहरु निर्णय लिन सक्ने क्षमता राख्दैनन् र तिनको संरक्षण सभ्य समाजको उत्तरदायित्व पनि हो भन्ने मेरो पनि मान्यता हो’ उनले अगाडि थपिन् यस्तो अवस्थामा, नाबालिगले ‘म पीडित हुँ’ भन्दा, उनको चरित्र माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउनु एउटा जिम्मेदार समाजको काम हुनै सक्दैन।
दोषी र निर्दाेष छुट्टाउने कर्तब्य कानुनको भएकोले कानुनलाई निष्पक्ष काम गर्न दिनु हामी सबैको कर्तब्य भएको समेत उनको धारणा रहेको छ।मंगलबार सार्वजनिक रुपमा अभिनेत्री रेखा थापाले बालिका कानुनतः सबै प्रकारको सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्र्ने बताएकी थिइन्।
२० वर्षमुनिका छोरीहरु बालिका हुन् बालिका कानुनतः सबै प्रकारका सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । समाजको भूमिका उनीहरुलाई संरक्षाण गर्ने हो,’ आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा अभिनेत्री रेखा लेख्छिन्, को सँग लभ छ रु कति पटक यौ’न सम्पर्क भयो रु यस्ता नैतिकतावादी कुराको कानुनलाई मतलव हुनुहुँदैन ।
समाजको आडम्बर त कुरा गरी साध्य छैन। केटी मान्छे भनेपछि दुनियाँ भरी कतै नभएका नैतिक मापदण्ड र हिलो छ्याप्ने चलन लज्जाजनक रुपमा नेपालमा व्याप्त छ। रेखाले नाबालिगको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएको केही घण्टापछि अर्की अभिनेत्री ऋचा शर्माले पनि नाबालिगको संरक्षण कानुनको सम्मान रहेको बताएकी छन्।
मलाई विश्वास छ नाबालिगको विश्वासको ह’त्या गर्नेको पक्षमा लागेर एक नाबालिगको चरित्र ह’त्या गर्न सक्दैन मेरो समाजले। नाबालिगको संरक्षण, कानुनको सम्मान हो, ऋचाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा लेखेकी छन्।
बुधबार अभिनेत्री पूजा शर्मा तामझामसहित नाबालिका ब’ला’त्का’र’का आरोपित पल शाहलाई भेट्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ जाँदा उनलाई हेर्ने र समर्थनमा नाराबाजी गर्नेको भीड थामिनसक्नु थियो । भीडभन्दा अलि पर पीडित किशोरीका बुवा चुपचाप बसेका थिए, छेउमा आमाको मौनता उस्तै थियो । यता आरोपितकै पक्षमा त्यो नाराबाजी उता गाउँमा गाउँलेको छिःछिः र दुरदुर।
यस्ती छोरी जन्माउनुभन्दा बरु बाँझै बस्नु बेस! पीडित बालिकाकी आमा छरछिमेकीको परिवर्तित व्यवहारबारे अधिवक्ता राधिका खतिवडालाई सुनाउँदा भक्कानिन्छिन्। बल्ल-बल्ल साहस जुटाएर न्यायको लडाइँमा सरिक उनको बुवा आरोपितकै रजगज देखेर अवाक् छन्।
अलि अघिसम्म प्रतिभावान छोरीले गाउँको इज्जत राखिन् भन्नेहरूले फेरेको बोली र व्यवहारले दुखाएको जरूर छ तर हराइसकेको छैन। हार्न नमिल्ने लडाइँमा लागेकाले हुनुपर्छ, यी दम्पतीको भरोसा राज्यसँग छ, यो बेलासम्म राज्य उनीहरूकै साथमा छ।
मिठो गाएर छोटो समयमा सफलताको उचाइ नापेकी १७ वर्षीया गायिकाको मनमा चलेको हुटहुटी र बेचैनीको पनि कुरा गरेर साध्य छैन । स्वाभाविक हो, मनमा हजारथरी कुरा खेल्छन्, रातभरि निद्रा पर्दैन, सामाजिक सञ्जाल खोल्दा बर्सिरहेका अश्लील गालीको असिनाले थिचिएर उठ्नै सक्दिन जस्तो लाग्छ उनलाई ।
छेउमै सुतिरहेकी साथीलाई कोट्याएर भन्छिन्, ‘अब म बाँच्न सक्दिन। उनको न्यायका निमित्त वकालतमा होमिएकी अधिवक्ता खतिवडाको मोबाइलमा म्यासेज आउँछ,’अब मर्छु होला दिदी! फेरि ओल्टोकोल्टो फेर्छिन् र भन्छिन्, ‘न्यायको यो लडाइँमा नजिती भएको छैन।
उनको यही अठोटमा साथ दिनेहरू आँट भरिदिन्छन्,निराश नहुन हौस्याउँछन् र उज्वल भविष्यको मार्गचित्र देखाइदिन्छन्। यसै पनि उनी न्याय प्राप्तिको यो मैदानमा सानो साहसले होमिएकी हैनन्। नत्र १४ वैशाख २०७८ मा अन्तिमपटक जबरजस्ती करणीको सिकार बनेकी यी किशोरीलाई बाहिर आउन र आवाज उठाउन आफैंसँग यति धेरै संघर्ष गर्नै पर्दैनथ्यो।
भन्नुस् त हुर्किंदै गरेको प्रतिभालाई जोगाएर अघि बढाउने दायित्व लिनुपर्ने मुलुकका नायकहरू फिल्मीशैलीकै खलनायक बनिदिंदा हामीले कसको पक्षधर हुनुपर्छ ? छोरीमाथि भएको अत्याचारको घटना बाहिर लिएर गए आफूहरूमाथि लाग्ने सम्भावित लाञ्छनाको आकलन किशोरीका आमाबुवाले पहिले नै गरेका थिए, त्यसैले प्रहरीको ढोका खोल्न जानुभन्दा उपयुक्त छोरीको मुख बन्द गर्नुमा नै देखे सायद।
सामान्य साक्षर बाबुआमा जसले घरको खेतीले नपुगेर परिवार धान्न ज्याला मजदुरी पनि गर्नुपर्छ, उनीहरूको मनमा के खेल्छ सम्भवतः हामीले अनुभूत गर्न सक्ने कुरा हो। तर अत्याचारको पनि सीमा नाघेपछि हर छोरीका बुवाआमा सायद यसैगरी अघि सर्छन् र समाजले लगाउने आक्षेपभन्दा कानुनले लेखेका अक्षरहरूको भरोसा गर्छन्।
अहिले एउटा समूहले अलिकति खुट्टा छोडेको छ। अपराधलाई मायाको नाम दिएर उमेर पुगेपछि बिहे गर्छु भन्दै आरोपित र बाहिर कुरा लगे आफ्नै बेइज्जत हुन्छ भन्दै आफन्तले बोल्न दिएनन्। किशोरीको कलिलो दिमागमा परेको असरभन्दा समाजलाई बेसी चिन्ता कानुनको पहिलो नजरमै अपराधी ठहरिन सक्ने पल शाह माथि छ।
उनको पक्षमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको तनहुँ सदरमुकाम दमौली नै पुगेर नाराबाजी गर्नेहरूको के कुरा गर्नु, जीवनभर महिला आन्दोलनलाई माध्यम बनाएर महिलाका नाममा प्रगति गरेका ‘महिला अधिकारकर्मी’समेत खुलेर लाग्दा उनीहरूको आन्दोलनको भरमा बनेको मुलुकको कानुनको धज्जी उडिरहेको छ।
नत्र मुलुकको कानुनले सिधै र बुझिने भाषामा भनेको छ १८ वर्षमुनिका बालिकामाथि सहमतिमा पनि यौ’न’सम्बन्ध गर्न पाइँदै। सिद्धान्ततः ‘मलाई कानुनको यो व्यवस्था थाहा थिएन’ भन्न पनि पाइँदैन । यति स्पष्ट कुरामा पनि पीडकको पक्षमा लागेर पीडितलाई झन् यातना दिन खोज्नेहरूको संख्या दिनदिनै थपिदै जानु समाजमा हामीले नै हुर्काइएको पितृ सत्ताको ऐंजेरु झन् झन् झांगिनु हो।
यसैका विरुद्ध आवाज दिन उठेकी गायिकालाई मनोबल दिने दायित्व आफ्नै काँधमा आउँदा दायित्वबाट पन्छिने छुट लिनुहुँदैनथ्यो, त्यस्तो देखिएन ।आफैं न्यायाधीश बन्न उद्यत एउटा जमातले अभिनेता पलसँग जोडेर ती गायिकालाई गिजोलिनै रह्यो।
आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारको घटना सार्वजनिक गर्न खोज्दा मिलापत्र गराउन तम्सिने र उनीहरूकै अन्तर्वार्ता गरेर सब ठीकठाक थियो भनेर सन्देश दिने सञ्चारकर्मीदेखि कलाकारसम्मको घेराबन्दीमा परेपछि विक्षिप्त बन्दै गएकी किशोरीमा जब अब लड्छु भन्ने सोच आयो, समाज कहाँ उनको पक्षमा देखियो र ? कलाकर्मी र अधिकारकर्मीको सहानुभूति बरु पीडकप्रति देखियो ।
आजको समाजको सबैभन्दा कुरुप दृश्य तपाईंले केही देख्नुभएको छ भने, यही नै हो।किशोरीमाथि ब’ला’त्का’र गरेको आरोप लागेर हिरासतमा रहेका पल शाहलाई शुभाशिष छ भन्न अधिकारकर्मी बन्दना राणादेखि भगवान साथमा हुनुहुन्छ भन्न अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरसम्म त्यो भीडमा लामबद्ध उभिए । उता ‘जस्टिस फर पल’ भन्नेहरुको तमासा दमौलीको सकडमा छरपष्टै छ।
‘मन मिल्दा चमत्कार, नमिल्दा ब’ला’त्कार !बार्गेनिङ नमिलेपछि आफूमाथि क’र’णी भएको आरोप लगउने ?’ चुकुल नलगाइ सुत्ने, अनि ब’ला’त्का’र भयो भन्ने ? एक वर्षअघि भएको घटनामा किन अहिले आएर मात्र बोलेको ? आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने, अरुलाई दोष दिने ?’ यी बनिबनाउ लाञ्छना हुन्।
कसैको अन्धभक्त बन्दा र के सही हो, के गलत छुट्याउन नसक्ने उमेरकी किशोरीमाथि यति विघ्न प्रश्नका तीरहरूले हान्दा यदि समाज खुसी हुन लागेको हो भने भन्नै पर्ने हुन्छ यो समाजमा सचेतना मूर्छित अवस्थामा छ, जगाउने काम हाम्रै हो। किशोरावस्था यसै पनि चुलबुले उमेर हो।
कसैको बहकाउमा लाग्नु, धाकधम्कीहरूसँग डराउनु, सही र गलत छुट्याउन नसक्नु अपरिपक्व मानसिक अवस्थाको संकेत हो। तर ३२ वर्षको परिपक्व व्यक्तिले किशोरीलाई प्रभाव या दबाबमा पार्छ भने दोष कसको हुन्छ ? यसै पनि उनी मानसिक र भावनात्मक हिसाबले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न सक्ने बलियो भएकै थिइनन्।
जरुर हो, आम मान्छेभन्दा उनी फरक छिन्। राम्रो प्रतिभा छ सानैदेखि प्रगति गरेकी छिन्। भन्नुस् त हुर्किंदै गरेको प्रतिभालाई जोगाएर अघि बढाउने दायित्व लिनुपर्ने मुलुकका नायकहरू फिल्मीशैलीकै खलनायक बनिदिंदा हामीले कसको पक्षधर हुनुपर्छ ? जबकि सार्वजनिक अडियो संवादमा पलले ती किशोरीसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको संकेत दिइसकेका छन्।
त्यहाँ पल, ती किशोरी र अन्य केहीको आवाज सुनिन्छ। अडियो कुराकानीमा किशोरीले ‘अब उपाय के त ? भनी सोधेका छन । साथै उनले विवाह गर्नका लागि भनेकी छिन्। जवाफमा पल यसो भन्छन्, यस्तो कुरामा चाहिं यति ठूलो डिसिजन लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। मेरो कारणले प्रेग्नेन्ट भएको भएचाहिं यो कुरा भन्न मिल्थ्यो।
यस्ता थुप्रै प्रमाण पीडित गायिकासँग छ, ती सबै प्रमाणको एउटै निष्कर्ष छ, उनलाई जबरजस्ती करणी गरियो र मानसिक यातना दिइयो। यही यातनाबाट उम्किन राज्यको साथ मागेकी उनले भनिन्, मैले यो लडाइँ जितें भने अरु पीडितलाई पनि साहस आउने थियो तर मलाई नै बाँचौं कि मरौं बनाइरहेका छन्
यद्यपि अब हिम्मत हार्नुहुँदैन भन्ने उनले बुझ्दै गएकी छन्। सम्भवतः उनले थाहा पाएकी छन्, जित्नका लागि बाँच्नुपर्छ। हामीले थाहा पाउनुपर्छ- उनी बाँच्नका लागि हाम्रो साथ चाहिन्छ। अब न्याय कसका लागि माग्नुहुन्छ तपाईं आफैं निर्णय गर्नुस्।